လင်္ကာ: ABSDF မြောက်ပိုင်းအရေးကိစ္စကို ဆန်းစစ်ခြင်း ….(ထွန်းအောင်ကျော်)
ABSDF မြောက်ပိုင်းအရေးကိစ္စကို ဆန်းစစ်ခြင်း ….(ထွန်းအောင်ကျော်)
ABSDF မြောက်ပိုင်းတွင် ဗဟိုဥက္ကဌ ကိုထွန်းအောင်ကျော်အပါအဝင်အဖွဲ့ဝင် ၃၀ ကျော်ကို ညှင်းပန်းနှိပ်ပြီး လူမဆန်စွာသတ်ဖြတ်ခဲ့ကြသည့် အပြင် လူ ၇၀ ကျော်ကိုရက်ရှည်လများနှိပ်စက်ညှင်းပန်းခဲ့ကြသည့် အဓိကတရားခံ မြောက်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များဖြစ်သော ရော်နယ်အောင်နိုင်(ထိုင်း)၊မျိုးဝင်း (သေဆုံး)၊ သံချောင်း (ထောင်တွင်း)တို့နှင့် တောင်ပိုင်းဗဟိုမှ မြောက်ပိုင်းသတ်ဖြတ်မှုကို လုံးဝတာဝန်ယူ သဘောတူ
ခဲ့ သည့် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာနိုင်အောင်နှင့် ဦးဆောင် ဗဟိုကော်မီတီဝင်များဖြစ်သော ဗဟိုရောက်မြောက်ပိုင်း ကိုယ်စားလှယ် ကိုလှဌေး(ယခုအိန္ဒိယ အေဘီဦးစီး)နှင့် နိုင်အောင်ဖက် ဗဟိုကော်မီတီဝင်များအနေနှင့် တာဝန်ယူဖြေရှင်းရမည်မှာ သာဓက ထင်ရှားစွာရှိနေပေသည်။
လက်ရှိ ကိုသံခဲဦးဆောင်နေသောABSDF ဗဟိုကော်မီတီကို၊မန္တလေးတွင် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သော အောင်းမေ့ ဘွယ် အခန်းအနားသို့၊ ဝမ်းနည်းကြောင်း သဝဏ်လွှာ အချိန်မှီပို့ပေးရန် တိုက်တွန်းခဲ့သော်လည်း လက်ရှိ ဗဟိုခေါင်းဆောင်များမှ မပို့ပေးဘဲ နေခဲ့ကြသည်၊ အေဘီဗဟိုကော်မီတီထဲတွင် မြောက်ပိုင်းကိစ္စသည်အကြီး အကျယ်မှားယွင်းမှု ဖြစ်သည်ကို လက်ခံကြသူများရှိသော်လည်းအဓိက အာဏာချုပ်ကိုင်ထားသူတချို့ က ဒေါက်တာနိုင်အောင်ဖက်ခြမ်းဗဟိုတွင် သဘောတူပါဝင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသူများ ဖြစ်ခဲ့သဖြင့် မိမိတို့မှားမှန်း သိလျက် လုပ်သင့်သည်ကို မလုပ်ဘဲ အမှားကိုပြင်ရန်သတ္တိမရှိဘဲ မြောက်ပိုင်းကိစ္စကို မြေမြုပ်သင်္ဂြိုလ်ရန် ဆိတ်ဆိတ်နေခဲ့ကြသည်ကို တွေ့ရသည်မှာ ဝမ်းနည်းစရာဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်အနေနှင့် မကဒတကို သမိုင်းမညစ်စေချင်သည့် စေတနာဖြင့်တိုက်တွန်းခဲ့သော်ငြားလည်း လက်ရှိ မကဒတ ခေါင်းဆောင်တချို့၏ဒေါက်တာနိုင်အောင်၏ စားကြွင်းစားကျန်များ စားထားသည့် အပင်းမှရုန်းမ ထွက်နိုင် ဘဲ ကိုယ်ပါ ရောပါမည့် ဘေးမှလွတ်ရန်၊ ကိုနိုင်အောင်မညိုညင်စေရန် မန္တလေး အထိမ်းအမှတ် ပွဲကို စာထုတ်ပြန် ပေးရေးမလုပ်ဘဲ ပျက်ကွက်ခဲ့ကြလေသည်။
(၁) မြောက်ပိုင်းခေါင်းဆောင်အမည်ခံ ရာဇဝတ်ကောင်များဖြစ်သောရော်နယ်အောင်နိုင်၊မျိုးဝင်း၊သံချောင်းတို့ သည် တရားခံများ၊တာဝန်အရှိဆုံး သူများဖြစ်ကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြထားသည်။
(၂) နိုင်အောင်ဗဟိုမှ ထုတ်သည့်စာတွင် အတိအလင်း မြောက်ပိုင်းလုပ်ရပ်ကို ထောက်ခံ အတည်ပြုထား ခဲ့ပြီး၊ အတွင်းရေးမှူး ကိုအောင်ထူးမှ ထိုသူများသည် သူလျှိုများဖြစ်ကြောင်း လုံးဝတာဝန်ယူကြောင်း လက်မှတ်ရေး ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
(၃)ထို့အပြင် ဒေါက်တာနိုင်အောင် ကိုသန်းဝင်းကို ပေးပို့သည့်အီးမေးတွင် ကိုမိုးသီးက နှစ်ခြမ်းမကွဲခင် သူလျှိများကို သတ်မိန့်ပေးခဲ့သည့်အထောက်အထားရှိသည်ဟုဆိုသည်။
(က) သို့ရာတွင် ယနေ့အထိ ထိုအထောက်အထားကို၊ ကိုနိုင်အောင်မှထုတ်ပြန်ပေးခြင်းမရှိချေ။
(ခ) မြောက်ပိုင်းလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုသည် မိုးသီး-နိုင်အောင် နှစ်ခြမ်းကွဲသည့်အချိန်အထိမဖြစ်သေး၊ နှစ်ခြမ်း ကွဲ စဉ်၊ မြောက်ပိုင်း ကိုယ်စားလှယ်ကိုလှဌေးက မြောက်ပိုင်းသည် ကိုနိုင်အောင်ဖက်ခြမ်း တွင် ပြတ်ပြတ် သားသားရပ်တည်ကြောင်း ကြေငြာပြီး ကိုနိုင်အောင်တို့ဖက်သို့ ပူးပေါင်းသွားခဲ့သည်။
(ဂ) ကိုနိုင်အောင် မြောက်ပိုင်းသို့ ကချင်ကျော်ကျော်တို့နှင့် သွားရောက်ပြီး မြောက်ပိုင်းထောက်ခံမှုကို ရယူအောင်ပွဲခံခဲ့သည့် အချိန်အထိ၊မြောက်ပိုင်းတွင်လူသတ်မှု မဖြစ်သေး။
(ဃ) ကိုနိုင်အောင် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ အကျဉ်းသားများကို စစ်ဆေးပြီးတချို့ကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် ရိုက်နှက်စစ်ဆေးသွားခဲ့သည်ကို လွတ်လာသူများ၏ တိကျခိုင်လုံသော ထွက်ချက် ရှိနေခဲ့သည်။
(င) ကိုနိုင်အောင်တို့နှင့်အတူ ပါလာသော ကချင်ကျော်ကျော်က၊ ကိုနိုင်အောင်တို့ပြန်သည့်အခါ ကချင်တွင်ကျန်ခဲ့ပြီး သေဒါဏ်ကျခံရသူများထဲတွင်ပါဝင်နေသည့် နန်းအောင်ထွေးကြည်ကို သေဒါဏ် ချမှတ်ထားခြင်းအပေါ်အပြင်းအထန်ကန့်ကွက်ခဲ့သဖြင့် နန်းအောင်ထွေးကြည် သေဒါဏ်မှလက်မတင်လေး လွတ်မြောက်သွားခဲ့ရပြီး အဖြစ်မှန်များကို ထုတ်ဖေါ်ခွင့် ရခဲ့ခြင်းဖြစ်သဖြင့် ကချင်ကျော်ကျော်ကိုကျေး ဇူးတင်ရပေသည်။
(စ)မြောက်ပိုင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ကိုမိုးသီးဖက်ခြမ်းမှ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှုဖြစ်ကြောင်း ဗြောင် စာထုတ်ခဲ့ခြင်း သက်သေခိုင်လုံစွာရှိနေခဲ့သည်ကို အားလုံးသိရှိဖတ်ရှုပြီးဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် မိုးသီး ဖက် ခြမ်း သည် မြောက်ပိုင်းလူသတ်မှုနှင့် မပတ်သက်ကြောင်း သိနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်သည် ကိုနိုင်အောင်အုပ်စု၊ ကိုမိုးသီးအုပ်စု ဘယ်အုပ်စုကိုမှဘက်လိုက်မည်မဟုတ်၊ ကျွန်ုပ် စိတ်ဝင်စား သည်မှာ ကိုယ်စတင်၍နေ့မအိပ်ညမအိပ် ပျိုးထောင်ပေးခဲ့သော မကဒတ ကျောင်းသားတပ်မတော်ကြီး ကို ခုတုံးလုပ်ခါ ကိုယ်နေရာရရေး၊ အာဏာရရေးတို့ကိုအဆင်ချင်တုံတရားမရှိ ဘဲ သွေးစွန်းထင်းစေခဲ့သူများ ကို ဖေါ်ထုတ်ပြီးအရေးယူနိုင်ရေး၊ အနာဂါတ်မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတွင် ဝင်မရှုပ်နိုင်ရေးတို့ကိုသာရည်ရွယ်ပါသည်။ ဘယ်သူ့ကို သာစေဘယ်သူ့ကို နာစေမရှိပါ။ရန်ကုန်တွင် မြောက်ပိုင်းအောင်းမေ့ခြင်း အခမ်းအနားသို့ မင်းကိုနိုင်တို့ ၈၈ မျိုးဆက်များ တက်ရောက်အားပေးခဲ့သလို၊ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၂ ရက်မန္တလေးတွင် ပြုလုပ်သော အခမ်းအနားသို့ကိုမြအေးနှင့်၈၈မျိုးဆက်များတကူးတကတက်ရောက်ပြီးကိုမြအေးမှ “ကိုထွန်းအောင်ကျော် နဲ့ကိုမောင်မောင်ကြွယ်တို့ဟာ ကျောင်းသားတွေဖြစ်တယ် ဆိုတာကျွန်တော့အသက်နဲ့ ထပ်ပြီးအာမခံရဲပါ တယ်” လို့ ပြောတာကိုကြည့်ရင် မြောက်ပိုင်းကိစ္စဟာ ကျောင်းသားတွေက သူလျှိုတွေကိုသတ်တာ မဟုတ် ဘဲ၊ သူလျှိုတွေ အာဏာရူးတွေက ကျောင်းသားတွေကိုသတ်တာ လိုဖြစ်နေတာ ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။
လက်ရှိ ABSDF ဗဟိုမှာ မသန်ရှင်းတဲ့သူတွေပါနေတယ်၊ မြောက်ပိုင်းအောင်းမေ့ဘွယ် အထိမ်းအမှတ်ပွဲကို ဝမ်းနည်းကြောင်းသဝဏ်လွှာပို့ရမှာကိုလက်တွန့်နေတဲ့ဗဟိုကော်မီတီဟာအမဲစက်စွန်းနေတာကို ဆေးကြော ဘို့ မလုပ်ဘဲ နွံ့ထဲကို ထပ်နှစ်လိုက်သလို ခံစားရတယ်။အောက်ခြေရဲဘော်တွေကို မကြည့်ဘဲ၊ ငါတို့ လုပ်ချင်တာလုပ်မယ်ဘယ်သူ့မှ ဂရုမစိုက်ဘူး၊ အဖွဲ့အစည်း နံမည်ပျက်ချင် ပျက်ပစေ၊ငါတို့ မှားခဲ့တာ၊ ငါ့ဆရာတွေ မှားခဲ့တာ မပေါ်အောင် ဖုံးမယ်ဆိုတဲ့တပါးကျွန် စိတ်ဓါတ်ဟာ မဆလ၊ နဝတတပ်တွေမှာ ရှိသလိုဒီမိုကရေစီရေး တိုက်ပွဲဝင် နေတယ်ဆိုတဲ့ မကဒတထဲမှာလဲရှိနေတာ ဝမ်းနည်းစွာတွေ့နေရပြီ။ ဒါကြောင့် မကဒတကနေ မြောက်ပိုင်းကိစ္စကို စုံစမ်းဘို့ ကော်မီရှင်ဖွဲ့တယ်ဆိုတာ ဘာလဲ၊ဒေါသထွက်နေတဲ့
ပြည်သူတွေကို ခေတ္တငြိမ်ဆေးများ ကြွေးပြီး နှစ်သိမ့်လိုက်သလားလို့သံသယရှိတယ်။
တချို့က ABSDF ကို တိုက်ခိုက်ဘို့ မြောက်ပိုင်းကိစ္စကို ဘန်းပြနေတာ၊ABSDF ကိုဖျက်သိမ်းဖို့တောင် ပြော လာကြပြီဆိုပြီး ညာသံပေးဒီလိုဖေါ်ထုတ်မှုကို မလိုလားအပ်ဘူး၊ အချိန်မကျသေးဘူးဆိုပြီး၊ ABSDFနဲ့ အဖြစ် မှန် ဖေါ်ထုတ်ရေးကို ရင်နာလွန်းလို့ ကြိုးစားနေတဲ့ သူတွေနဲ့လှည့် ရန်တိုက်ပေးဘို့ အကွက်ဆင် လာကြတယ်။ အဲဒီလိုအော်နေကြသူတွေကို ကြည့်လိုက်တော့ ကိုနိုင်အောင့် တပည့်တပန်းတွေဖြစ်နေတာ ကို တွေ့ရတော့ သိပ်မအံ့သြမိပါဘူး အဖွဲ့နဲ့ပေးအပ်ထားတဲ့ အာဏာကို အလွဲသုံးစား လုပ်ပြီး ပြစ်မှု ကျူးလွန်သူတွေကိုဖေါ်ထုတ်နေတဲ့သူ တယောက်အနေနဲ့ တခု အာမခံနိုင်တာကငါဟာ ABSDF ကို ပျက်အောင်လုပ်နေတာ မဟုတ်ဘူး၊ ကိုယ့်ရဲ့ဥာဏ်စွမ်းရှိသမျှနဲ့ တတ်နိုင်သမျှ ကြိုးစား ကာကွယ်ပေးနေ တာဖြစ်တယ်၊ လက်ရှိ ဗဟိုကော်မီတီရဲ့ ဦးဆောင်မှု မကောင်းရင်ငါတို့ ဘယ်လောက်အားပေးအားပေး ပျက်မှာဘဲ၊ ဗဟိုအနေနဲ့အမှန်တရားကို ကျောခိုင်း၊ ပြည်သူတွေ ရဲဘော်တွေရဲ့ လိုလားချက်တွေကို မျက် ကွယ်ပြု၊ လုပ်သင့်တာကို သတ္တိရှိရှိ မလုပ်ဘဲတွေဝေနေရင် ပြည်သူက ကျောခိုင်းတာကို ခံရမှာဘဲ။
(မှတ်ချက်။ ။စာရေးသူ ဦးထွန်းအောင်ကျော်သည် ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင်ABSDF ကျောင်းသားတပ်မတော် ကို စတင်ထူထောင်ရာ၌ ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပြီး ယခုအခါ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတွင်နေထိုင်လျက်ရှိသည်၊ ABSDF မြောက်ပိုင်းတွင် မတရား စွပ်စွဲသတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသော အထက်ဗမာပြည် ဗ.က.သ ခေါင်းဆောင် ကွယ်လွန်သူကိုထွန်းအောင်ကျော်နှင့် အမည်ချင်း ဆင်တူနေ ပါသဖြင့် စာဖတ်သူဂရုပြုနိုင်ရန် အသိပေးအပ်ပါသည်။ -ပျူနိုင်ငံ)